असोज २० देखि दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्न विभागको प्रस्ताव – Dainik Sangalo
असोज २० देखि दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ खोल्न विभागको प्रस्ताव
September 28, 2020 133
१२ असोज, काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले असोज २० गतेबाट सार्वजनिक सवारीमा दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउन प्रस्ताव गरेको छ । यातायात व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्दै विभागले असेज २०देखि २५सम्म अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
तर,सरकारले गरेको प्रस्तावमा व्यवसायीहरुले घुमाउरो रुपमा असहमति प्रकट गरेका छन् । उनीहरुले यसबारे थप छलफल हुनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका सम्बन्धमा सरकारले लिएको नीति पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
उनका अनुसार विभाग यसबारे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र कोभिड(१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र ९सीसीएमसी०मा यसबारे जानकारी गराउने बताएको उनले बताए । यही बेला व्यवसायीले सरकारलाई पत्र नै लेखेर आधा सिटमा मात्रै यात्रु बोक्ने निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।
Prevजङ्गलमा ट्रकको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु, यहाँ किन हुन्छ जहिलै दुर्घटना ?
Nextमलेसियामा रोजगारीका लागि गएका नेपालीको लागी आयो यस्तो अत्यन्तै खुशिको खबर !
३८ सय वर्ष पुरानो देवीको मुर्ती फेला परेपछि हेर्न आउनेको भीड
४१ वर्षीया शशिकला राईलाई ‘ब्रेन ट्युमर’, शल्यक्रिया गर्न आर्थिक अभाव
राशिफल हेर्नुहोस : वि.सं.२०७७ साल पौष २४ गते । शुक्रबार । ईश्वी सन् २०२१ जनवरी ०८ तारिख